Rooms Drábské yihiin haraadiga qalcaddii asalka alwaax on blocks sandstone ee Dneboh ku cadastral ee degmada of Mlada Boleslav, 4 km bari ee Munich Hradiste. Waxay ku taallaa aagga dabiiciga ah ee la ilaaliyo Bohemian Paradise, oo ku taal dhulka xeebta Europe NATURA 2000 iyo Příhrazské skály Nature Reserve. xoog dhagaxii la dhisay geesta waqooyi ka madal loo yaqaan Castle at sare ah oo ku saabsan 370 m (mitir 105-155 socodka webiga Jizera). Castle tan 1958 ilaaliyo oo qayb ka ah taallo ballaaran dhaqanka, oo daboolaya a qalcado degaanka ballaaran leh ku xiga Klamorna. Mulkiilaha dhulka leh qalabka dhismaha waa Czech Republic, maamulka iyo daryeelka dhismaha waxaa bixiya kaymaha Czech Republic.
joogitaanka deyrka lahaa oo magac oo aan la garaneyn waxaa la aasaasay by diiwaanka qaddiimiga ah mararka qaar qeybtii labaad 13. qarnigii, inta lagu guda jiro waxqabad la taaban karo gumaysigii hradišťských Cistercians. Rooms Drábské leh dhow Klamorna iyo qalcado Old Castle Příhrazy ugu yaraan hore u adeegay sidii dhibcood waardiyayaasha, ilaalinta u tamashle Pojizerské territory keniisad oo qayb ka. Natiijooyinka qaddiimiga ah oo tiro badan muujiyaan jiritaanka qalcaddii ilaa 14. qarnigii iyo wax yar oo kaliya in 15. qarnigii, marka waxaa loo arkaa dib u cusboonaysiin lagu jiro dagaalladii Hussite.
Isticmaalka meelaha la gooyay inta lagu jiro mudada casriga casriga ah waxaa sidoo kale lagu diiwaangeliyaa baabuurta taariikhiga ah. Qoraallada qaar ka yimid 16. iyo 17. qarniyo isku dhaf ah oo qoraallada ilo-qoran waxay u oggolaanayaan kulammada xubno ka mid ah midnimada qaran iyo joogitaanka joogitaanka wadaadka Utrakvistic. Cidhifyada qaar ka mid ah dhagaxyada dhagaxyada iyo rikoorkii hore ee qalcadda ayaa isbeddelay macdanta dhagaxda dhagaxda.
Qalabka waxaa lagu dhisay shan ama todoba saqaf oo dhagax ah, oo ay kala soocaan dildilaacyo dhuuban. In heerarka dhowr 15-40 dhagaxyada m sare waa sii raagayaan xardhay meel labaatan hawlaha kala duwan, shan harta wadiiqooyinka xardhay aasaaska alwaax ka dib toddoba dhismayaasha iyo buundooyinka iyo shan iyo berkeddii la qoray evidencing dayada palisades alwaax. On cidhifyada dhagaxyada waxaa suurtogal ah in dib u dhiska galxidhka alwaax, inta u dhaxeysa blocks waxaa jira tracks ka dib markii dillaacyo ayaa xiran. Awoodda hirgelinta oo dhan waxay ahayd minaar ballaaran oo dhir udiyaar ah oo ilaalinaya albaabka galbeedka ka dib markii la hakiyo ama la dhimo buundada. Goobaha dhexdhexaadinta ah ayaa laga soo qaaday bari bari laga soo galo ka dib markii dhagxaanta xayiraadda joogtada ah. Qolka ugu weyn ee qalabku waa kaniisada - qol leh meelo la jarjaray, oo laga helay 1921.
Drábské světničky waa dalxiis caan ah oo caan ah. Maanta helaan dalxiiska in crack hoose-farshaxan dhagax ahayd badan tahay in 1830, jaranjarada la kordhiyay ee labaataneeyada ee qarnigii labaatanaad, ee Club of Dalxiiska Czechoslovak. Maanta, qaybta ugu muhiimsan ee qaybaha ugu sarreeya ee dhagaxyada dhagaxyada ayaa ku xiran nidaamka jaranjarooyinka iyo buundooyinka (wareega wareega).
Booqashadii qalcadda waa lacag la'aan waxayna socotaa hage. Safarka dibedda wuxuu ka bilaabmaa albaabka albaabka laga soo galo, lagu cusboonaysiiyay 2016. Qeybtan qaybteeda waxaa marwalba laga heli karaa booqdayaasha 1. Abriil ilaa 31. Oktoobar, maalintiiba, xaaladaha cimilada oo kooban.
Habka ugu gaaban ee dhagax weyn ayaa soo socota calaamadda dalxiiska ee cagaaran ee laga soo galo baabuurta Kavčina ee tuulada Dneboh (0,6 km). Tareenka ugu dhow ee joogta tuulada Brezina on line 070 Prague-Turnov ayaa ku yaal jidka jaalaha ah oo ka fog dhagax dhererka 2,5.
Dhulka hudheelka ee Drábské světničky wuxuu ka kooban yahay qaybta waqooyi-galbeed ee Příhrazská Highlands inta u dhaxaysa bilaashka Na Krásné vyhlídce iyo Klamornou. Dhagaxyada dhagaxyada laba kilomitir ah ayaa lagu sharxay 111 Dhibcooyinka 915 ee ku socda wadooyinka.
Dhamaan dhagaxyada dhagaxa ah ee la xidhiidha qalcadda Drábské světnička, dhammaan dhaqdhaqaaqyada qubeyska waa mamnuuc in la ilaaliyo dhismaha dhaqanka. Tani waxay khusaysaa waxyaabaha ku qoran database ee buuraha Association Czech ah: Massif Drabske, dhexdhexaad ah, column Drabske, dhir afar-caleen iyo derbiga waqooyiga iyo bariga munaaraddii Cadaay.
Czech JannadaRooms DrábskéNATURE 2000
Daqiiqado 10 horaantii